नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको कम्पनी विश्लेषणः चुक्तापूँजी २ अर्ब पुर्‍याउन १०ः६ अनुपातमा हकप्रद | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको कम्पनी विश्लेषणः चुक्तापूँजी २ अर्ब पुर्‍याउन १०ः६ अनुपातमा हकप्रद
मुख्य खबर, लगानी 150 views
कम्पनीले सार्वजानिक गरेको चालू आव २०७४/७५को दास्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार रू. १७ करोड ८ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी ९४ प्रतिशतले बढेकाले नाफा बढेको हो । सोही अवधिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २५ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ३९ करोड २० लाख छुट्याएको छ । कम्पनीले बीमा कोषमा रू. १९ अर्ब २६ करोड जम्मा भएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमाभन्दा २२ प्रतिशतले बढी हो । साथै बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार यस कम्पनीले १० बराबर ६ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नको लागि कात्तिक २७ गते निवेदन दिएको छ । निवेदन दिएसँगै कम्पनीले ९९ लाख ३६ हजार ४ सय ७७ दशमलव ५४ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । सो हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख पुग्नेछ । यसरी हेर्दा कम्पनीले हकप्रद शेयर जारीपछि बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पुग्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १४४५
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ३७०५
५२ हप्ताको न्युन व्यापार मूल्यः रू. १४४५
१८० दिनको औषत व्यापार मूल्यः रू. १६८३.६६
अध्यक्षः प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंह
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः भरत बस्नेत
स्टक टिकरः एनएलआइसीएल
विगत पाँच वर्षको प्रमुुख वित्तिय परिसुचकहरु (रू. हजारमा)
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ६ दशमलव ४१ प्रतिशतबाट बढेर रू. १० दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा ७१ प्रतिशत बढेर रू. १४ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।
कम्पनीले महाविपत्ती कोषमा रू. १३ करोड ३३ लाख छुट्याएको छ भने रू. २३ करोड ६ लाख आम्दानी गर्दा रू. ५ करोड ९८ लाख खर्च भएको छ । कम्पनीको खुद चालू सम्पत्ती रू. ४ अर्ब ९ करोड रहेको छ ।
कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा रू. २ अर्ब ६० करोड बीमाशूल्क आर्जन गरेको छ भने कुल कायम रहेको बीमालेखको सङ्ख्या ८ लाख ९ हजार ९ सय ७० रहेको छ । ६ हजार २ सय १७ जनालाई रू. १६ करोड ३५ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम रू. १६ करोड ३५ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको दास्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. २० दशमलव ६३, मूल्य आम्दानी अनुपात ७६ दशमलव ३५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय २३ दशमलव ५९ रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ११ गुणा छ ।
खरीद चापः कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप साढे १ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म १ हजार ९ सय ३४ कित्ता शेयर खरीद र १ हजार १ सय ८२ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
२३ नोभेम्बर २०१७ २२ फेब्रुअरी २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ५७ दिनको करोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो मारोबाजु आकृती बनेको छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत देखाउँछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५७ दिनको करोबारमा न्युट्रल जोन (३६ दशमलव ९२ स्केल)मा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनामा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५७ दिनको करोबारमा २७ दशमलव शून्य ४ बिन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५७ दिनको करोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. १ हजार ४ सय ४५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महंगिएमा रू. १ हजार ५ सय २० मा प्रतिरोध पाउछ सक्छ ।